Steam: Obodo, Storelọ Ahịa na Egwuregwu Ndị Ahịa maka GNU / Linux | Site na Linux
Mgbe ị na-agagharị site na ngwa egwuregwu vidiyo maka GNU / Linux, dị ka GameHub, Itch.io y Lutris, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ịghara ịkwụsị ịza ajụjụ banyere ozi emelitere banyere nke kachasị mma, nke eji na nke zuru oke ikpo okwu (Community / Store / Customer) na egwuregwu na GNU / Linux, ya bu, Steam.
Ee Steam bụ maka ọtụtụ, nke kachasị mma dijitalụ video nkesa game nyiwe. Karịsịa, maka ịbụ akụkụ nke ụlọ ọrụ a ma ama n'ụwa, nke na-amalite egwuregwu na ngwaike ịgba egwu, a na-akpọ valvụ.
N'ihi nkwado ahụ, Steam taa bu ebe ha ọrụ (òtù / ahịa) nwere ike zụta ma budata ọtụtụ egwuregwu, sitere na ndị nrụpụta dị iche iche (ndị nrụpụta ngwanrọ), dị na gị katalọgụ buru ibu ma na-eto eto. Na mgbakwunye, inwe ike ịnụ ụtọ ọrụ na uru ndị ọzọ.
1.1 Kedu ka Steam si arụ ọrụ?
1.2 Etu esi etinye ma jiri Steam na GNU / Linux?
Kedu ka Steam si arụ ọrụ?
Ghọta ma jiri Steam ọ dị ezigbo mfe. E wezụga iji egwuregwu efu, n'efu ma ọ bụ oghe, nke a ga-enye na-enweghị mmachi, n'ụzọ bụ isi, mgbe ị zụrụ egwuregwu na ya, ihe ị na-azụ bụ ndenye aha ya, ya bụ, otu ndenye aha (nke onwe na nke na-agaghị ebufe) enwere ike ịnweta site na nbanye akaụntụ gị.
Steam anaghị enye anụ ahụ ọ bụla egwuregwu ọ bụla. Agbanyeghị, ọ na-enye ohere ịmepụta otu ya na ụfọdụ usoro anụ ahụ ka ebudatara. Egwuregwu nke na-ejikọ aka na akaụntụ onye ọrụ, iji nye ha ohere ibudata, wụnye ma jiri ya ọtụtụ oge ha chere na ọ dị mkpa, yana na kọmputa ha chọrọ, na-enweghị mmachi ọ bụla, belụsọ ịmalite ya site n'otu kọmputa n'otu oge, maka etiti akaụntụ gị.
Steam dị site na gị ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị, ebe n'etiti ọtụtụ ihe, onye ọbịa nwere ike ịdebanye aha ya Obodo, gaa na shop ịzụta na / ma ọ bụ budata egwuregwu, ma budata ya Onye na-egwu egwuregwu, n'ihi na ha Usoro njikwa arụnyere na kọmputa gị.
Etu esi etinye ma jiri Steam na GNU / Linux?
Ugbu a, nke Steam egwuregwu ahịa dị na .deb usoro, na 1.0.0.61 mbipute. Tupu nbudata na wụnye ya na a Comp Kwekọrọ n'Ozizi Sistemụ nrụọrụ, n'ihe atụ anyị, a MX Linux 19.1, nkesa dabere na DEBIAN 10.3, ọ bụ ihe amamihe ịdebanye aha na ntanetị weebụ mbụ. Usoro ahụ dị mfe ma dị ka ndị a:
Mwepụta weebụsaịtị maka ndebanye aha onye ọrụ na / ma ọ bụ nbanye.
Ibudata ma wụnye n'aka ndị ahịa Steam Games.
Mbido mbụ nke Steam Game Onye ahịa maka mmelite gị na nhazi ikpeazụ gị.
Ojiji nke thelọ ahịa ahụ maka ịwụnye na ịgba ọsọ egwuregwu dị.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, ma ndebanye aha na Steam ikpo okwudị ka budata, ntinye, nhazi na ojiji nke ụfọdụ n'ime egwuregwu efu (Egwuregwu na-egwu) ma ọ bụ akwụ ụgwọ (azụmahịa) O siri ike ma ọlị, na ihu ọma ihe niile ga-adabere na ngwaike nke kọmputa eji na ndakọrịta nke ya GNU / Linux Distro ịkwado Steam na ihe ndi o choro, na ihe ndi choro eji egwu egwu.
Zuo ike, ma soro Steam, GameHub, Itch.io y Lutris, ma ọ bụ ngwa ndị ọzọ maka egwuregwu vidiyo ndị dị ka retro console emulators ma ọ bụ egwuregwu desktọọpụ ọ bụla, egosiri na ugbu a GNU / Linux bụ ihe magburu onwe ya Gambe Sistemụ nrụọrụ na ọkwa dị nso na nke Windows na MacOS.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «Steam» magburu onwe ya na kpara ikpo okwu maka ndị na-egwu egwuregwu niile na otu, ebe ọ bụ a Community, Store na Ahịa nke multiplatform egwuregwu, nwere ọmarịcha, nnukwu na katalọgụ nke «Juegos compatibles» Maka anyị Free na Mepee Sistemụ, nwee nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Steam: Obodo, Storelọ Ahịa na Egwuregwu Ndị Ahịa maka GNU / Linux
Ọ bụrụ na ị na-ere mmemme, ịkwesịrị ịkwado mmemme na Proton
Aghọtara m na ọ bụrụ na ịzụrụ Software site na Steam, ị nwere ike ịnweta ya site na ya, yabụ ọ bụrụ na anyị nọ na Linux yikarịrị ee, a na-eji Proton iji kwado ya.
Abịa na nhọrọ iji rụọ ọrụ Proton
Febụwarị 2020: Ihe ọma, ihe ọjọọ na ihe na-adọrọ mmasị nke Software efu
Manjaro Linux 19.0 “Kyria” biara na Linux 5.4, Xfce 4.14, KDE 5.17, Gnome 3.34 na ndi ozo